Dadaalka dib u heshiisiinta Soomaaliya - BBC Somali
Dadaalka dib u heshiisiinta Soomaaliya
Image caption kalluunka laga helo dalka Soomaaliya
Dadaalka dib u heshiisiintu deegaannada qaar waa ka dhan galay sida Gaalkacyo, Somaliland iyo meelo kale. Laakiin waxaad moodda in meelaha qaar lagu guuldarreystay in xal waara laga gaaro sida Muqdisho iyo Kismaayo, shabeellada Hoose iyo Hiiraan oo kale.
Ra'iisal Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheikh Axmed waxaa uu maalmahan socdaal shaqo ku joogay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka ku-meel-gaarka ah ee Jubba. Waxaana uu socdaalkiisu salka ku hayay sidii la isugu keeni lahaa dhinacyada isku-haya siyaasadda maamulka gobolkaas.
Barnaamijka galabta waxaan ku eegeynaa maxaa ka khaldan dadaalka dib u heshiisiinta Soomaaliya?
Waxaa ka qayb gelaya siyaasiyiin, saxafiyiin iyo aqoonyahanno la socda arrimaha Soomaaliya.Waxaa ka mid ah:
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo wasiir ka soo noqday dowladihii kumeelgaarka ee Soomaaliya.
Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo culuumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Nairobi.
Faisal Cali Waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah, UCID, ee Somaliland. Khadka telefoonka ee waddanka Jarmalka ayuu ku jiraa.
Dhegeystayaashu waxay kaga qayb gelayaan khadadka bulshada ee Facebook, codad ay duubeen iyo telefoonnada intaba.